🥇 Garmin Fenix ​​7: Ihe Anyị Chọrọ --hụ - 【Tụnyere】
Garmin Fenix ​​7: ihe anyị chọrọ ịhụ
Garmin Fenix ​​7 O nwere ike ọ gaghị abata rue Ọgọstụ 2020, yabụ na-atụghị anya ya, anyị anụbeghị ọtụtụ ihe banyere ya, mana ọ na-abịa ịbịa, anyị nwekwara echiche nke ihe anyị ga-atụ anya na ya.
N’okpuru, ị ga - achọta ozi ga - abụ maka ụbọchị mwepụta na ego a ga-ewepụta ya, yana ịkọ nkọ banyere atụmatụ na nkwalite a ga - enye, n’okpuru ị ga - ahụ ndepụta nke ihe ndị anyị chọrọ ịhụ.
Jide n'aka na ị na-elele anya oge niile, dịka anyị ga-emelite akụkọ a na akụkọ, nkwupụta, na asịrị ruo mgbe mmalite nke Garmin Fenix ​​7 line.
2 Garmin Fenix ​​7 weputara ubochi na ego
3 Garmin Fenix ​​7 Leaks na Akụkọ
4 Ihe anyị chọrọ ịhụ na Garmin Fenix ​​7
5 1. Anya ọhụrụ
6 2. Mee ka ọ dịkwuo ọnụ
7 3. Tinye ihuenyo mmetụ aka
8 4. Anyanwụ na-akwụ ụgwọ n'ogologo ya
9 5. Tinye ECG
10 6. Onye na-eme mkpọtụ mkpọtụ
11 7. Kọwaa ihuenyo
12 8. Tinye mmeju ndụmọdụ
Kedu ihe ọ bụ? Na onye nọchiri Garmin Fenix ​​6
Kedu mgbe ọ ga-apụta? Eleghi anya august
Ego ole ka ọ ga-eri? O doro anya na ị ga-enweta ọnụahịa adịchaghị
Garmin Fenix ​​7 weputara ubochi na ego
Ihe mbu iburu n’uche bu na Garmin Fenix ​​7 nwere ike o gaghi abu ihe nlere ozo n’ime uzo iji malite, dika anyi nwere ike nweta Garmin Fenix ​​6 Plus na mbu.
Otu ma ọ bụ nke ọzọ n’ime ha nwere ike ịtọhapụ na ngwụcha 2020, ikekwe na Ọgọst, ebe ewepụtara Garmin Fenix ​​6 na Ọgọstụ 2019.
Ọ bụrụ na ọ bụ Fenix ​​6 Plus launching afọ a, anyị nwere ike ọ gaghị ahụ Fenix ​​7 ruo mgbe ngwụsị nke 2021, mana edemede a na-elekwasị anya na ụdị nke na - esote, kpọọ Garmin Fenix ​​7 ka ọ dịrị gị mfe.
Ejiri Garmin Fenix ​​6 bidoro na August 2019 (Ebe E Si Nweta Foto: LaComparacion)
Banyere ọnụahịa elekere, na mbido Garmin Fenix ​​6 bidoro na € 529.99 / € 599.99 / AU € 949. Nke a bụ maka ọkọlọtọ Fenix ​​6, mana enwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na nso a, dị ka Fenix ​​6S, Fenix ​​6X Pro na Fenix ​​6X Pro Solar, maka ego nke € 999 / € 1,149.99 / AU € 1,549.
Ọ bụ ezie na enweghi asịrị banyere ọnụahịa nke Garmin Fenix ​​7 akara mana, ọ ga-abụ na ọ ga-eri ego yiri ya.
Nke ahụ kwuru, Garmin na-edozi ọnụahịa nke ụdị ọhụụ ma amaara ya ka ọ gbagoo ma ọ bụ gbadaa, yabụ Fenix ​​7 nwere ike ịdị elu karịa ma ọ bụ peepe. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na anyị na-atụ anya na ọ ga-abụ ọkwa "kwụsie ike", anyị na-atụ anya nha nha anya - ụdị ndị toro eto na-abụkarị nhọrọ dị ọnụ ala maka ndị na-achọghị ụdị ọhụụ.
Garmin Fenix ​​7 Leaks na Akụkọ
Enweghị asịrị banyere Garmin Fenix ​​7 ma, mana anyị nwere ike ịkọ ụfọdụ atụmatụ na mgbanwe ndị enwere ike.
Dịka ọmụmaatụ, teknụzụ na-acha ọkụ nke ejiri na ụdị dị elu nke Garmin Fenix ​​6 nwere ike ịdị n'ofe.
Garmin nwekwara ike ịga ogologo oge iji belata nha na ịdị arọ nke elekere ahụ, na-emebi iwu ya n'èzí.
Ihe ntaneti na nkwalite ihuenyo yikarịrị, ọ ga-abụ na anyị ga-ahụ atụmatụ ọhụụ. Kpọmkwem ihe na-edoghị anya, mana anyị edepụtala n'okpuru ụfọdụ echiche nke ihe anyị ga-achọ ịhụ.
Ihe anyị chọrọ ịhụ na Garmin Fenix ​​7
Dị ka Garmin Fenix ​​6 dị, enwere ohere maka mmelite, yabụ nke a bụ ihe anyị na-atụ anya n'aka Garmin Fenix ​​7.
1. Anya ọhụrụ
Onweghị onye ga-ebo Garmin Fenix ​​6 ebubo na ha dị mma. Ọtụtụ mgbe ọ dịghị mkpa, ọ bụ elekere dị na mpụga ma ọ dabara adaba, mana ọ dịkwa oke ọnụ ma ị nwere elekere dị oke ọnụ nke na-enweghị amamịghe ma ọ bụ nkecha zuru oke maka ọnọdụ niile.
Na mgbakwunye, nnukwu ụlọ a nwekwara mmetụta na akara ngosi ahụike gị, n'ihi na na nyocha anyị, anyị chọpụtara na ọ dị oke oke ka e wee nwee nkasi obi maka yoga, dịka ọmụmaatụ.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-achọ ịhụ ka Fenix ​​7 dị ala ma weghachite nke ọma. Anyị ejighị n'aka etu ọ ga-esi rụọ ọrụ, ebe anyị achọghị ka ọ mebie ọrụ ya yana ogologo oge, mana ọ ga-amasị anyị ka Garmin nwalee ya.
2. Mee ka ọ dịkwuo ọnụ
Ọ gaghị ekwe omume ịgbanahụ eziokwu ahụ bụ na Garmin Fenix ​​6 dị oke ọnụ, ọbụnadị karịa Apple Watch 5. Ọ bụ ugbu a ọkwa dị elu, yabụ na ọ ga-adị oke ọnụ mgbe niile, mana ọ bụrụ na Garmin nwere ike belata price, o kwesịrị ime ka Fenix ​​7 na ihe ndị ọzọ mara mma ka a wider nso nke ndị mmadụ.
3. Tinye ihuenyo mmetụ aka
Maka laptọọpụ dị elu, Garmin Fenix ​​6 enweghị ezigbo atụmatụ ọgụgụ, gụnyere ihe ntanetị.
Ugbu a enwere ezigbo ihe kpatara inwe pimpụl: ịgba ọsọ ma ọ bụ igwu mmiri na ihuenyo abụghị usoro kachasị mma nke mmekọrịta, ọkachasị na laptọọpụ gbadoro ụkwụ na egwuregwu, na d 'na-akagbu kwochie nsuso ọrụ na okwu ọkara yana iji asacha ezé. n'aka na ọ ga-abụ ọdachi.
Ya mere, anyị achọghị ka bọtịnụ na-aga ebe ọ bụla (ọ bụ ezie na nke a nwere ike inye aka belata nha elekere), mana anyị ga-achọ itinye ihe nhọta nhọrọ mgbe ị na-eji ya dị ka smartwatch oge niile. Ọ bụrụhaala na anyị nwere ike igbochi ya mgbe ọ bụla anyị chọrọ.
4. Anyanwụ na-akwụ ụgwọ n'ogologo ya
Garmin agbakwunyela ụgwọ ọkụ nke anyanwụ na Garmin Fenix ​​6X Pro Solar, mana imirikiti ụdị Fenix ​​6 anaghị etinye ya, yabụ anyị ga-achọ ịme nke a maka akara Fenix ​​7. .
Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, anyị ga-achọ ịhụ na ọ ka mma, n'ihi na nyocha anyị, anyị ahụghị ya iji meziwanye ndụ batrị. Site na Quatix 6X Solar nke ewepụtara na nso nso a, Garmin egosila na ike anyanwụ nwere ike ime ezigbo ọdịiche, na-ekwe ka elekere ahụ ruo ụbọchị 24 n'etiti ebubo, yabụ anyị ji nlezianya nwee nchekwube.
5. Tinye ECG
Ọ bụ ezie na Garmin Fenix ​​akara na-elekwasị anya na ahụike karịa ahụike zuru oke, ọ nweghị ihe kpatara na ịnweghị ike ịme ma, yana ịtinye ECG (EKG) ga-enyere nke a aka.
Anyị ahụla ha na Apple Watch na mbụ, ọ bụkwa atụmatụ dị oke mkpa nke nwere ike ịchọpụta ọrụ obi adịghị mma.
6. Onye na-eme mkpọtụ mkpọtụ
Akụkụ ọzọ achọpụtala na Apple Watch bụ mkpọtụ mkpọtụ mkpọtụ, nke ga-eme ka ị mara mgbe ọkwa decibel gbara gị gburugburu ruru ọkwa nwere ike imebi ịnụ gị.
Ọ bụ obere ma nwere ike ịba uru nke ga-eme ka mgbakwunye dị mma na mpaghara Fenix. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe na-ekpebi ihe; Anyị ghọtara na oke Fenix ​​bụ elekere anya nke ọtụtụ iche iche maka ndị na-eme egwuregwu, yabụ na anyị anaghị atụ anya na ha kwekọrọ na njirimara nke smartwatch dị omimi na gburugburu ebe niile.
7. Kọwaa ihuenyo
Garmin Fenix ​​6 nwere ihuenyo 260 x 260, nke ahụ abụghị nke ukwu mana ọ na-acha uhie uhie ma e jiri ya tụnyere ụfọdụ smartwatches, yabụ anyị ga-achọ ịhụ n ’ihu igwe na Garmin Fenix ​​7.
Nke ahụ kwuru, na pikselụ ụba nwere ike ịpụta mmetụta na ndụ batrị, nke ga-aka mma bụ ikike ịhọrọ mkpebi mmepụta nke ihuenyo ahụ, dịka ụfọdụ Samsung Galaxy smartphones. mee ya.
8. Tinye mmeju ndụmọdụ
Ezubere Polar Grit X nke emere na nso nso a maka ndị egwuregwu na-agba ntachi obi, otu n'ime atụmatụ ya kachasị ama ama bụ ihe anyị ga-achọ ịhụ na Garmin Fenix ​​7 na-abịanụ: ndụmọdụ mmanụ. Nke a na - egbochi gị ma gbochie ịkụ mgbidi ahụ site n'ịkpọ gị ka ị nwee mmiri na carbs n'ụgbọ mmiri oge niile, dabere na physiology na ọrụ gị. Ọtụtụ oge ị na-amataghị na mmiri agwụla gị ma ọ bụ na glycogen agwụla ruo mgbe oge ga-aga, yabụ ọ nwere ike ịchekwa gị ọtụtụ ihe mgbu na ogologo oge ma ịga ije.